Sanda fifanakalozana eran-tany. Fiovàna an-tserasera amin'ny vola hafa.
Troy grama ny volamena / elektronika volamena) Ny Malagasy ariary Troy grama ny volamena / elektronika volamena) Ny Euro Troy grama ny volamena / elektronika volamena) Ny US dolara Troy grama ny volamena / elektronika volamena) Ny Bitcoin Troy grama ny volamena / elektronika volamena) Ny Yuan Troy grama ny volamena / elektronika volamena) Ny Yen
Volafotsy Troy Ny Malagasy ariary Volafotsy Troy Ny Euro Volafotsy Troy Ny US dolara Volafotsy Troy Ny Bitcoin Volafotsy Troy Ny Yuan Volafotsy Troy Ny Yen
Kianjam-pandrindrana exchange - serivisy an-tserasera izay ahafahanao manisa ny sandam-bola sandoka manerana izao tontolo izao, i.e. ny vola rehetra amin'izao fotoana izao.
Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana dia atolotry ny Banky eropeana. Malagasy ariary Napetraky ny bankin'ny firenena nasionaly isan'andro isan-andro. Ny kajy ny tahan'ny fifanakalozana dia mampiseho izany vaovao avy amin'ireo loharanom-baovao ofisialy maimaim-poana.
Azonao jerena ireo soatoavina roa ireo ny Malagasy ariary ny vidin'ny fifanakalozana hafa amin'ny vola hafa ao amin'ny tranokala moneyratestoday.com ao amin'ny serivisy Kianjam-pandrindrana exchange.
Ny fifanakalozana fiovam-po na fifanakalozana ny vola iray ho an'ny hafa amin'ny tahan'ny hafa dia atao any amin'ireo banky ara-barotra. Ny taham-panakalozana eo amin'ny banky dia miorina amin'ny fototry ny sandam-bola cross, izay manara-maso isan'andro amin'ny fanaovana kajy fifanakalozana.
Jereo ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny, ary koa ny vola euro, dolara, yuan ary vola hafa eto amin'izao tontolo izao ao amin'ny serivisantsika an-tserasera Kianjam-pandrindrana exchange ary handika ny vola rehetra amin'ny tahan'ny mety.
Ao amin'ny Malagasy ariary ny kajy amin'ny tahan'ny fifanakalozana, dia raisintsika ho isa ny isa manaraka ireto:
Betsaka ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny Malagasy ariary amin'ny vola hafa dia raisina amin'ny fototry ny tahan'ny tahan'ny cross. Ohatra, ny taham-panakalozana Malagasy ariary mankany kilao Sterling dia matetika atao kajy mifototra amin'ny tahan'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary manohitra ny dolara amerikana sy Euro. Loharano fampahalalana ho an'ny kajy ny lanjan'ny Malagasy ariary ho an'ny anio dia miorina amin'ny fomba ofisialy avy amin'ny banky nasionaly sy ny Banky Eropeana.
Ho fanampin'ny pejy fanampiana sy ny programa Malagasy ariary tahan'ny fifanakalozana amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao Desambra 04, 2021 amin'ny forex tsena, misy tolotra hafa maimaim-poana hafa amin'ny tranokala.
Ny banky dia manao kajy ny fiovam-po ho an'ny vola rehetra, ao anatin'izany Malagasy ariary, isan'andro isan'andro mifototra amin'ny kajy ny fifanakalozana fifanakalozana. Araraoty ao amin'ny tranokala ny sandan'ny eo ho eo amin'ny fifanakalozana fifanakalozana. Ohatra, ny tahan'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary amin'ny fifanakalozana Forex amin'ny Internet.
moneyratestoday.com amin'ny tena fotoana dia manara-maso ny tahan'ny sandam-bola rehetra eto amin'izao tontolo izao.
Ao amin'ny kajy, ny kaonty fifanakalozana dia raisina avy amin'ny loharanom-baovao misokatra sy ofisialy.
Ao amin'ny kajy azonao jerena:
cross-rate Malagasy ariary Ny dolara sy ny tahan'ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny banky nasionaly ho an'ny anio,
mampiseho ny fiampitana ny Malagasy ariary manoloana ny dolara sy ny euro avy amin'ny Banky Eropeana,
eo no eo Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny fifanakalozana forex amin'ny Internet.
Ny fampiasana ny kajy ny tahiry fifanakalozana dia tena tsotra.
Raha te hahalala ny tahan'ny sandam-bola iray amin'ny vola hafa, ampidiro ny anaran'ireto vola ireto ao amin'ny sehatry ny kajy vola ary tsindrio ny bokotra kajy. Azonao atao ny miditra ao amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Raha te hahita ny tahan'ny mihemotra, dia ovao ny toerana misy ny vola mifanakaiky, mifanindry ny rohy "miova".
Raha mila ny tahan'ny fifanakalozana ny Malagasy ariary ny dolara amerikana, dia ampidiro ny anaran'ny Malagasy ariary amin'ny sehatra voalohany amin'ny fifanakalozana kajy , ary eo amin'ny sehatra faharoa "dolara amerikana". Raha mila tahan'ny cross-dolara amerikana amin'ny Malagasy ariary ianao, dia kitiho ny "fiovana" ary ny kajy no hampisehoanao ny tahan'ny mifanohitra amin'izany.
Ao amin'ny kajy, misy fomba faharoa hahitana ny Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny vola hafa eran'izao tontolo izao.
Ao amin'ny pejin'ny serivisy, ny kajy ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny tranokala moneyratestoday.com ao amin'ny sakana Exchange tahan'ny. Izao tontolo izao vola rehetra fiovam-po. Ao amin'ny lisitry ny vola dia mahita Malagasy ariary ary tsindrio ny rohy Malagasy ariary ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny vola hafa ilainao.
Ao amin'ny kajy, ny kaonty fifanakalozana, havaozina ny fampahalalana momba ny tahan'ny fifanakalozana ofisialy raha vantany vao napetraky ny banky ofisialy.
Mirary soa amin'ny fampiasana ny serivisy fanaovana fifanakalozana.